Eoropa hatrany Azia: Bahrain no misy ny Hub logistika an-dranomasina haingana indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Eoropa hatrany Azia: Bahrain no misy ny Hub logistika an-dranomasina haingana indrindra
Vaovao Mafana Bahrain • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety!
Ny Fanjakan'i Bahrain dia nandefa ny foiben'ny logistika multi-modal haingana indrindra ao amin'ilay faritra ary tsy misy afa-tsy 2hr ny fihodinan'ny kaontenera rehetra - midika izany fa ny vokatra dia mety ho an'ny mpanjifa amin'ny antsasaky ny fotoana sy amin'ny 40% amin'ny vidiny.
Ny fandefasana ny “Bahrain Global Sea-Air Hub” dia samy manana ny toerany stratejika Bahrain eo afovoan'ny tsena eropeana sy azia ary koa ny akaiky ny tsena kendren'ny faritra amin'ny alàlan'ny fametrahana ny foibe fitaterana an'habakabaka marobe mahomby indrindra any amin'ny faritra miaraka amina fahatrarana manerantany.
Ny hub dia miankina amin'ny fizotran'ny fahazoan-dàlana madiodio, ny lozisialy nohavaozina, ary ny fanaovana nomerika feno hahatratrarana ny fotoana mitarika farany ambany amin'ny roa ora monja ho an'ny entana mivezivezy avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Bahrain mankany Khalifa bin Salman Port, ary ny mifamadika amin'izany.
Ireo tombony azo dia mihena amin'ny fihenan'ny 50% amin'ny salan'isa eo ho eo raha oharina amin'ny entana an-dranomasina madio ary 40% ny fihenam-bidy raha ampitahaina amin'ny entan'ny rivotra madio. Arak'izany, ny ivon-dranomasina any Bahrain dia toerana iray manandanja ho an'ireo mpanamboatra sy mpandefa entana, indrindra eo amin'ny sehatry ny krizy fandefasana entana.
I Bahrain dia hanome ny satan'ny Mpiara-miasa amin'ity tetik'asa ity amin'ny tsena rehetra manerantany izay mamela ny fanomezana ny orinasan-tseraserany ny tombontsoa ho tonga Trusted Shipper ao amin'ny hub logistics air-to-air Global Bahrain.
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fifandraisan-davitra an'i Bahrain, HE Kamal bin Ahmed dia nilaza hoe:
“Ny fananganana an'ity hub logistics Global Sea-to-Air ity, izay haingana indrindra any Moyen Orient, eto Bahrain dia fotoana tena mety fa tsy ho an'ny orinasa logistika manerantany ihany fa ho an'ireo mpanondrana manerantany. Ity serivisy ity dia mety hitarika fihenam-bidy 40% raha ampitahaina amin'ny entan'ny rivotra fotsiny ary 50% ny fotoana fitarihana haingana kokoa noho ny entana an-dranomasina madio. "
Nanampy izy hoe: "Tsy afaka manao an'io isika noho ny toerana tsy manam-paharoa, ny akaiky ny seranan-tsambontsika, ary koa ny mpanara-maso, ny mpandraharaha ary ny tompon'andraikitra amin'ny seranan-tsambo miasa miaraka akaiky ary ny vahaolana fikirakirana nomerika avo lenta."
Ity hub ity dia hahafahan'ny fitomboan'ny sehatry ny logistika any Bahrain izay handray anjara amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny harinkarenan'ilay Fanjakana. Ny fitomboan'ny harinkarena faobe tsy solika ao Bahrain dia nahatratra 7.8% tamin'ny Q2 tamin'ny 2021.
Ny sandan'ny asa ao anatin'ny sehatry ny lozisialy dia 45% ambany any Bahrain raha oharina amin'ny tsena mifanila aminy, araka ny tatitra nataon'ny KPMG 2019 "Cost of Doing Business in Logistics". Nametraka an'i Bahrain ho toerana mahaliana ho an'ny orinasa manerantany sy isam-paritra miasa ao anatin'io sehatra io i Bahrain.
Momba ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fifandraisan-davitra (MTT)
Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fifandraisan-davitra an'i Bahrain (MTT) no masoivohon'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana sy ny fitsipiky ny fotodrafitrasa momba ny fitaterana sy ny fifandraisan-davitra.
Miaraka amin'ny tanjona faratampony amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana sy ny fanamorana ny fivezivezen'ny olona sy ny entana amin'ny alàlan'ny tany, ranomasina ary fitaterana an-habakabaka mifanaraka amin'ny vina ara-toekarena 2030, ny MTT dia asaina mandroso ny indostrian'ny fitaterana sy maharitra sy fifandraisan-davitra hanohanana ny fanjakana. fitomboana ara-toekarena.